အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီကားလေး လက်မလွှတ်သင့်... | Buzzy
အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်တယ်ဆို ဒီကားလေး လက်မလွှတ်သင့်...
ယူတို့ရဲ့မင်းသားချော Lee Seung Gi နဲ့ Moon Chae Won တို့ရဲ့ ဇာတ်ကားလေး
ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါတော့ ကိုရီးယားမင်းသားချော Lee Seung-gi ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။Love Forecast ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။
မင်းသမီးကတော့ Moon Chae Won ဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာ Park Jin Pyo ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးနဲ့ယောကျာ်းလေးကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ နူးညံ့လိုက် ရှုပ်ထွေးလိုက်နဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့အကြောင်း ခပ်ပါးပါးလေးဖော်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးပါ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ သတင်းကြေညာသူ Kim Hyun-woo (Moon Chae-won) ဟာ အလှအပကြောင့်ရော၊အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပါ နာမည်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမက အရက်သောက်တတ်တယ်။ပြီးတော့ အရမ်းဆဲဆိုတတ်တယ်ဆိုတာလေးကတော့ off-screen လေးပေါ့။
သူမမှာ ၁၈နှစ်နီးပါးခင်မင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း Kang Joon-soo (Lee Seung-gi)ရှိပါတယ်။သူကတော့ အချစ်ရေးမှာအမြဲတမ်းကံမကောင်းတတ်သူပေါ့။မူလတန်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချစ်ရေးမှာ အမြဲတမ်းစွန့်ပစ်ခြင်းခံနေရတဲ့ Kang Joon Soo ဟာ သူငယ်ချင်းမလေးအပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရက်ရ်ှလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Hyun Woo က သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့စည်းလေးခြားထားတဲ့နောက်သူတို့ ဘယ်လိုဆက်သွားကြလဲ?ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမလဲ?သူတို့ကြားမှာသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့စည်းကို ခွာချနိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းလေးပါပဲ ဆက်ပြီးဖြစ်သွားမလားဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး
အပြာကားတွေမှာ သုတ်အတု ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ဆိုတာကို သရုပ်ပြထားတဲ့ ဂျပန်မလေး
ကိုယ့်စော်နဲ့ ဒီလိုဆော့ရဲဖို့ဆိုတာ တော်ရုံ skill နဲ့ မရဘူး
အာရှအမျိုးသားပွန်းစတားတွေ ဂျပန်မှာ အလွန်လိုအပ်မှု ဖြစ်ပေါ်
ကြည့်မိသူတိုင်းကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် ကြာစိရဲ. သီချင်းသစ်
Trailer video နဲ့တင်ပရိတ်သတ်တွေတစ်ခဲနက်အားပေးခြင်းကို ခံနေရပြီဖြစ်တဲ့သူစိမ်းအိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ကန်တော့ပွဲမှာ မြင်တွေ့ရမဲ့ အိချောပို...
ဘရာမပါပဲ လူထုကြား ထွက်လာတဲ့ အနုပညာရှင်များရဲ. ပုံရိပ်